अब टुटल र पठाओले यात्री बोक्न नपाउने, बोकेको भेटिए कडा कारवाही हुने ! – " सुलभ खबर "
अब टुटल र पठाओले यात्री बोक्न नपाउने, बोकेको भेटिए कडा कारवाही हुने !
यो पनि पढ्नुहोस : कास निर्माणमा राजनीतिक गर्नुहुँदैन : मन्त्री महासेठ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विकास निर्माणमा राजनीति नगर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बलम्बु–दहचोक जोड्ने पुलको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले विकास निर्माणमा सबै दल हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । “विकास भयो भने जनता आर्थिक वृद्धिदरतर्फ जानेछन्, देशलाई समृद्धितर्फ लान सबैको भूमिका आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री महासेठले आफू मन्त्री भएपछि सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा दुई हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र र २४३ वटा पुल निर्माण गरिसकेको बताउनुभयो । सरकारले रेलमार्ग तथा जलमार्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विकास र समृद्धिका लागि जनाताको हितका लागि वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले दिगो विकासमा सबैको हातेमालो हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । चन्द्रागिरि नगरपालिका प्रमुख घनश्याम गिरीले दहचोक–बलम्बु जोड्ने पुल बाढीका कारण क्षति पुगेकाले आवतजावतमा निकै समस्या परेको बताउनुभयो । उक्त पुल निमार्णका लागि नगरपालिकाबाट रु १५ लाख आर्थिक सहयोग गरेको थियो ।